GEEDKA JINKA AH EE UBAXYADA UBAXA: NIDAAM LAGU SAMEEYO HABKA, SIDA LOO SAMEEYO SI HABBOON GURYAHA XAYAWAANKA AH, SI AY UFUDUDAAN, GOORMA AYAA UGU FIICAN IN LA SAMEEYO? - SOOSAARKA DALAGGA
Geranium waa ubax dhalaalaya oo qurux badan oo qurxin kara qol kasta. Warshadu waxay caan ku tahay ubaxyada ubaxyada oo ay ugu badan tahay qayb weyn oo ay ku jirto unpretentiousness.
Si kastaba ha noqotee, dabeecadda aan dabiiciga aheyn ee eranium macnaheedu maaha in aysan u baahnayn daryeel iyo fiiro gaar ah. Mid ka mid ah marxaladaha ugu muhiimsan ee daryeelka ayaa ah caleemo, kaas oo ah in si sax ah loo sameeyo iyo waqtigeeda. Tani ayaa looga doodi doonaa maqaalkeena. Waxa kale oo aad daawan kartaa fiidiyaha waxtar leh mawduucan.
Goorma iyo intee in le'eg ayuu Bloom?
Bloom geranium wuxuu bilaabmaa bilaha hore ee guga. iyo, xaaladaha wanaagsan, sii socdo ilaa Sebtembar. Si aad u ilaaliso muuqaalka qurxinta ee ubaxa, waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah u xoqdo oo jiido.
Maxay tahay guno iyo sababta loo baahan yahay?
Nidaamka gooyo ee Geraniums waa in la gaabiyo caleemaha dheer iyo ka saarto jir ah jirridaha. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo taas ma aha oo kaliya si ay u hesho caws ubax cusub, laakiin sidoo kale si loo gaaro qaab geedka qurux badan. Haddii aadan fulin manjooyin, caleemaha hoose ee warshadda waxay bilaabaan inay dhacaan, laamuhu waxay noqdaan kuwo caan ah, iyadoo natiijada ubaxa ay lumiso quruxdiisa.
Geranium wuxuu leeyahay burooyinkeeda hurdada ah ee ku dhawaad ​​meel kasta.Si kastaba ha ahaatee, ma awoodo in ay soo saarto geeddi-socodka marxaladaha aan gargaarka aadanaha. Gooyo waxay soo baxdaa burooyinkeeda hurda, taasoo keentay in la sameeyo caleemo cusub oo leh burooyinkeeda ubaxa.
Intaa waxaa dheer, xakamaynta dhererka caleemaha iyo heerka koritaanka baadiyaha waa faa'iido leh:
xayeysiis ah ubax dheer iyo badanba;
siinta warshad xitaa qaab isku dhafan;
dardar-gelinta dheef-shiid kiimikaad ee ku yaal geedka iyo hagaajinta tayada;
fududeynaya geranium jiilaalka;
hagaajinta aeration iyo nalalka;
ka hortagga dhacdooyinka cudurada.
Digniin: Faa'iido kale oo laga gooyo geraniums waa in natiijo ahaan, ubaxlaha uu soo saaro wax beerto in qaabka gooyn cusub.
Haddii geedka geranium uu yahay mid aad u ballaaran, ka dib goynta xagjirka ah ee caleemaha, dhirta ayaa gebi ahaanba xooga saaraya koritaanka ubaxa cusub iyo caleemaha cusub, sababtoo ah caanaha inflorescences soo muuqan doonaan goor dambe ama aan muuqan dhammaan. Si looga fogaado tan, ubax waaweyn waxay u baahan yihiin oo kaliya gaabinayaan jiran, laamaha dheer oo aan lahayn caleemo.
Goorma ayay tahay waxa habboon in la sameeyo?
Iyadoo ku xiran hadafka loo yaqaan 'budowga' waa la fuliyaa, waxaa jira saddex siyaabood oo lagu fulinayo.
Ugu weyn. Ujeedada manjooyinkan waa in la helo ubax farabadan oo badan iyo qaabaynta qaab qurux badan oo baadiyaha ah. Manjooyinka ugu muhiimsan waxaa lagu sameeyaa isla markiiba ka dib markii ubax ka baxo xilliga nasashada. Waqtiga ugu habboon ee tani waa xilliga dabayaaqadii Febraayo ilaa bartamihii Maarso, taas oo ah, illaa bilowga xilliga daaqsinka. Geranium Blooms ka dib markii manjooyin ka dib markii caadiga ah, laakiin xilliga ubax sii dheeraan doonaa, iyo tirada iyo size of inflorescences kor u kici doonaa.
Dayrta. Tan iyo dhirta waxaa loo diyaariyey mudada intiisa kale, waxay qaadataa meel ka dib ubax of geranium, ku dhowaad bartamihii-dayrta. Dhamaan caleemaha qallalan iyo qoorta iyo caleemaha ubaxa waa la jaraa. Nidaamyada noocan oo kale ah ma saameynayaan ubaxyada mustaqbalka ee baadiyaha, laakiin waxay leeyihiin wax dabiici ah. Dheecaan dheer ayaa la gooyaa marka loo baahdo aagga caleenta caleen ugu horeysa, si ay u soo baxaan mustaqbalka oo ay sii wadaan koritaanka - korka barta. Qaabka ugu weyn ayaa la gooyaa saddexaad.
Gardarrada. Waxaa la qabtaa haddii loo baahdo wakhti kasta sanadka marka laga reebo jiilaalka.
Iyadoo la'aanta iftiinka xilliga qaboobaha, geranium si adag ayaa loo soo saaray, taas oo si xun u saameeya qurxinta iyo ubaxa. Si kastaba ha ahaatee, marnaba ma soo gaabin kartaa caleemaha ee December iyo January! Tani waa muddada ugu adag ee ubaxyada guriga, gooyaa oo kaliya xanuuno.
Waa muhiim: Haddii meelaha burburay laga helo geedka, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro inta lagu jiro manjooyin - taasi waxay gacan ka geysaneysaa joojinta horumarka cudurka. Gooyo ubax sanadle ah ayaa la sameeyaa oo keliya si ay u siiso qaabka la doonayo.
Diyaarinta dhirta gudaha iyo qalabka
Ka hor goynta, waxaad u baahan tahay inaad u diyaariso qalabka iyo ubaxa habka loogu talagalay.. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay:
caleemaha nadiifka ah oo dhan oo qalalan, hurdi iyo caleemo cagaaran iyo ubaxyo;
ku nadiifi qalabka biyo nadiif ah, aalkolo ama wakiil gaar ah.
Wareegidda ubaxa waxay ugu fiican tahay in la isticmaalo mindida, qalabka dhismaha ama mindida jikada leh maro dhuuban. Waa inaadan isticmaalin maqas - waxay ku gudbin karaan astaamaha waxayna ku carqaladeynayaan dhismaha unugyada goobta gooyska.
Xeerarka aasaasiga ah: sida loo qaabeeyo baadiyaha?
Si aad u hesho qaabka la rabay ee germanyum, waxaad u baahan tahay inaad bilowdo inay isla markiiba sameyso ka dib markaad beerto ubax., qabashada dayrta iyo manjooyin guga iyo qanjaruufo. Dhalinyarada, si firfircoon u kobciya dhirta waa in la barbar dhigo si loo kobciyo koritaanka caleemaha lateral.
2-3 toddobaad ka dib markii caleenta caleemaha yar yar u baahan tahay in la xoqo biqilka apical.
Laamihii ka soo baxa laabta sare ee afkoda ayaa laga saaraa ama la gooyaa ka dib 3-4 caleemaha cagaarka ayaa u muuqda iyaga.
Si looga fogaado dhumucda, marka hore la gooyey ama qanjaruufo ee caleemaha sii kordhaya gudaha baadiyaha ayaa la sameeyaa.
Marka dhirta ay gaarto qaabka la rabay, waa in la joojiyaa.
Haddii geranium ka baxo jarida, qanjaruufo waa in la fuliyaa heerka 8-10 caleemo, iyo haddii laga bilaabo abuurka - heerka 6-8.
Waa lagama maarmaan in la fahmo in dhammaan shaqada la qabanayo, laga bilaabo natiijada la rabay. Tusaale ahaan, si aad u hesho warshad ah qaab kubir leh, ma noqon doonto mid ku filan si loo kiciyo koritaanka caleemaha dhinaca kali ah. waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah looga saaro laamihii soo dhacaya muuqaalka qurxinta ee baadiyaha iyo si joogto ah u daryeeli taajka ah ee baadiyaha, jarida caleemaha waaweyn iyo jir ah heerka heerka 3-5.
Tilmaamaha tallaabo tallaabada ah iyo nidaamyada dhirta ee ubaxa
Ka feker sida si habboon u jajabiso jasiiradda guriga si ay u barbardhigto si caan ah oo ufudud. Farshaxanka ah ee germanyum ubaxu wuxuu si toos ah ugu xiran yahay tayada manjooyin. Iska jar geedka sidan soo socota:
Si looga fogaado adkaynta iyo samaynta caleemaha cusub, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo astaamaha korka sare ee caleen ka soo horjeeda qaybta sare ee baadiyaha iyagoo leh qalab diyaarsan.
Si aan uga tagin qashin jarista, caleemaha ayaa la jarjaray caleen.
Waa in la googooyaa afkaha koraya ee baadiyaha.
Si ay warshadku u noqoto tamar aad ku sameysid dhismaha ugu weyn, waxaad u baahan tahay inaad xoqdo koritaanka ka soo xididka.
Waxaa lagama maarmaan ah in la soo saaro laamood caleenta ah, iyo sidoo kale caleemaha jiran iyo dhashaba.
Goobaha ayaa la jarayaa heerka 4-5 caleen ah.
Caleemaha waaweyn waa in la gooyaa saddex meelood hal meel.
Si looga hortago suurtogalnimada caabuqa ubaxa, waxaad dhigtaa qaybaha la gooyey ee firfircoon ama dhuxusha ama budada qoraxda.
Ka dib markii manjooyin, waxaa lagama maarmaan ah in lagu quudiyo geranium leh bacriminta-nitrogen-ku jira.
Qanjaradu sidoo kale waxay caawisaa sidii ay u heli lahaayeen ubax geedka.. Hawlahaas ka dib, baadiyaha waxay noqotaa mid ballaaran oo ka sii wayn.
Waxaan kugula talineynaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan manjooyin sax ah ee germanyum ee ubax:
Maxaa dhacaya haddii qalad la sameeyo?
Qaladka ugu caansan ee loo ogol yahay by ubaxlayaasha marka goynta geraniums waa:
Ugu dambeyntii. Xakamaynta adag ee wakhtiga dhirta gooyey - xaalad lagama maarmaan ah. Sababtoo ah nidaamka xilliga jiilaalka wuxuu bilaabi doonaa inuu dhaco inflorescences.
Heerka sinnaanta khaldan. Haddii aad sare uga kacdo wareegga caleenta, qaybta xad-dhaafka ah ee asliga ah ayaa u engegi doonta, taasoo keenta in dhammaan biqilaha uu dhinto.
Manjooyin caan ah. Haddii aad ka baxdo caleemo badan oo waqti badan, dhirta waxay joojinaysaa koritaanka iyo ubax, soo celinta xoogga ka dib markay keentay walbahaarka.
Manjooyin badan oo soo noqnoqda waxay horseedaa horumarinta gaabinta burooyinkeeda cusub.
Guddi: Qodobka aasaasiga ah marka la jaro gooyo geraniums waa in la raaco wakhtiga loo qabtay mudadaas. Haddii geranium si khalad ah loo jarjaro, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo warshad leh daryeel wanaagsan oo ay ku siiso heer aad u fiican ee waraabinta, bacarimid iyo iftiin. Ha ku dhibin geedka isla markaana sii wakhti si aad ugu kabsato.
Geranium waa mid ka mid ah ubaxyada ugu jecel ee ku dhowaad dhammaan beeralayda ubax. Daryeelka iyada ma aha mid adag, xitaa bilowga ah ayaa qaban kara. Waxyaabaha ugu muhiimsan - si loo ilaaliyo dhirta, muuqaalka taas oo lafteedu kugula socodsiin doonto baahida loo qabo manjooyin iyo qanjaruufo. Iyadoo la raacayo dhammaan talooyinka, nidaamyadani ma keeni doonaan dhibaatooyin waxayna caawin doonaan helitaanka ubax qurux badan, qurux badan oo ubax ah.